ရှေးကာလ၌နှံစားလှဲခြင်းအတွက်ရိုးရိုးစပါးခြွေလှေ့စက်တစ်ခုဖြစ်သည်,ဂျုံ,Millet,ဆန်, ကောက်ပဲသီးနှံနှံနှံ၏ကောက်လှိုင်းကိုကောက်ယူခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုမာကျောသောမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှံစားနှိမ့်သောနယ်လှည့်ခြင်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုနင်းနင်းရန်ဖြစ်သည်။, ဂျုံအဖြစ်လည်းကောင်း၊,ဆန်,ပဲပုပ်,မြေပဲ,သို့မဟုတ်မြေပဲ, ကောက်နယ်တလင်းတွင်ကောက်လှိုင်းများကိုတုတ်နှင့်တုတ်ဖြင့်ရိုက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကောက်လှိုင်းများဖြန့်ထားသောစပါးနယ်ရာကြမ်းများတွင်ခဲယဉ်းရလိမ့်မည်, လက်ဖြင့်ကြိတ်ခြင်းဤနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုကိုအသုံးပြုပါ, အလုပ်သမားတစ် ဦး ရရှိနိုင်သည် 15 ရန် 40 sorghum များအတွက် hour.manual စပါးကိုခြွေလှေ့စက်နှုန်းထုတ်ကုန်၏ကီလိုဂရမ်, အရာအတော်လေးဘုံဖြစ်ကြပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဒေသခံသိမ်းသွားလေ၏ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏, နှံစားပြောင်းကဲ့သို့သောအစေ့၏နားရွက်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်ခွံခွင့်ပြုပါ,ပြောင်း,ဂျုံ,ဆန်. ဤရွေ့ကားအများအပြားမော်ဒယ်များအတွက်လာ, သူတို့ထဲကတချို့ဟာမော်တာယူဖို့တပ်ဆင်ထားသည်; သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ကိုင် sorghum ခြွေလှေ့စက်တစ်ခုလက်ကိုင်သို့မဟုတ် pedal.Use အားဖြင့်မောင်းနှင်ကြသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ် ဦး တည်းသာ worker.With ၏အထွက်နှုန်းလိုအပ်သည် 14 ရန် 100 ကီလိုဂရမ် / အတွင်း, ၎င်းတို့သည်အသေးစားထုတ်လုပ်မှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်
အချိန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖြစ်,တိရိစ္ဆာန်များမှကောက်နယ်တလင်းကိုရရှိနိုင်ပြီးများသောအားဖြင့်ကောက်လှိုင်းအလွှာကိုတိရိစ္ဆာန်များအားမောင်းနှင်ခြင်းဖြင့်နှံစားလှော်မှုန့်များစွာပြုလုပ်နိုင်သည် 30 စင်တီမီတာထူ။ ဒီစစ်ဆင်ရေးမျိုး, အရာလည်းဟုခေါ်သည် “ထွက်နင်း”, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အညီအမျှကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ အချို့သောအာရှနိုင်ငံများတွင်နှံစားပြောင်းခြင်းကိုဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်, တိရိစ္ဆာန်အုတ်ကောင်များအစားစွမ်းအင်သုံးထွန်စက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ စပါးကိုကောက်နယ်တလင်းစက်ဝိုင်းပေါ်ရှိအလွှာများ၌ပြန့်နှံ့နေသောဆန်အဆန်များပေါ်တွင်နှစ်ကြိမ်ထွန်စက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စပါးကိုရရှိသည်။ 15-18 အချင်းမီတာ.
sorgum များအတွက်မော်တာဆန်စပါးခြွေလှေ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူခြွေလှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အခွံ၏လုပ်ငန်းများဖော်ပြရာတွင်,ဆန်,ဂျုံ, အဓိကရည်ညွှန်းချက်မှာစက်တပ်ဆင်ထားသောခြွေလှေ့စက်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြင့်ပေါင်းစပ်စက်များဖြင့်အစားထိုးသည်, ထိုစက်များသည်ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အရေးကြီးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ convertibility.By များအတွက်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအစားထိုးခြင်းနှင့် setting ကိုအတွက်သင့်လျော်သောအပြောင်းအလဲများကို, ဒီစက်တွေကအမျိုးမျိုးသောစပါးအမျိုးမျိုးကိုကုသနိုင်သည် (ဥပမာ၊. ဆန်, ပြောင်း, ငရုတ်သီးစိမ်း, ပဲ, နေရောင်, ဂျုံ, ပဲပုပ်, စသည်တို့).၎င်းကိုလှည့်နေသောစပါးနယ်လှည့်ဖြင့်လည်းကောင်း၊, ထိုစက်များတွင်ကောက်ရိုးကိုလှုပ်ခါရန်နှင့် Brain ကိုသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စေရန်စက်ကိရိယာများရှိသည်။, ဤအတောင့်တင်းသည့်သူများကို rubbertyred ဘီးများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးလယ်ပြင်သို့အလွယ်တကူသွားလာနိုင်သည်.
များစွာသောအသေးစားလယ်သမားများတွင်, စက်မှုခြွေလှေ့စက်များသည်လက်ဖြင့်လှီးခြင်းဖြင့်လက်ဖြင့်ရိုက်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်, မကြာခဏစပါးယိုဖိတ်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အလေ့အကျင့်, စပါးကျိုး, နှင့်ဖွဲမှစပါးကိုမပြည့်စုံခွဲခြာ. လက်ဖြင့်ကောက်နယ်တလင်းလုပ်ခြင်းသည်လုပ်သားနှင့်အချိန်ကုန်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လူ့စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်များမြင့်တက်ခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်တွင်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။. စျေးနှုန်းချိုသာသောနိဒါန်း, အသေးစားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သည့်စက်ယန္တရားခြွေလှေ့စနစ်များသည်အဓိကအစားအစာသီးနှံများအတွက်ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ဆုံးရှုံးမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်.
ငါတို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည် ဘက်စုံသုံးစပါးကိုခြွေလှေ့ ပြောင်းဖူးနှင့်ပဲပုပ်ကိုလှန်နိုင်သည့်စက်ဆုံးရှုံးမှုလုံးဝမရှိဘဲနှံစားပြောင်းအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောစပါးခြွေလှေ့စက်ကိုထုတ်လုပ်သူများမှထုတ်လုပ်မည်, ဆန်, ပဲ, နှံစားပြောင်းနှင့်အခြားကောက်ပဲသီးနှံများ. နှံစားပြောင်းများအတွက်မော်တာစပါးကိုခြွေလှေ့ဖြစ်ပါတယ် 40 ပဲပုပ်ရိတ်သိမ်းသည့်အခါလက်ဖြင့်ရိုက်နှက်ခြင်းထက်အဆများပိုမြန်သည်, ဖုန်မှုန့်လုံးဝနီးပါးမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ, သုညစက်အရှုံးအနီးရှိရှိပါတယ်, အစေ့ကိုခွဲမထားဘူး, အမှိုထွက်လှုံ့ဆော်ပေး, ထိရောက်စွာလည်ပတ်ရန်လူနှစ် ဦး သာလိုအပ်သည်. စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သည့်သီးနှံမျိုးစုံစပါးခြွေလှေ့စက်များကိုလည်းစမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့သည် 5-50% စပါးစက်ဆုံးရှုံးမှု, လူတွေပိုပြီးလည်ပတ်ဖို့လိုအပ်တယ်, နှင့်ဖုန်မှုန့်ပမာဏထုတ်လုပ်ခဲ့သည်. မတူညီသောကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်စပါးခြွေလှေ့ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိသည့်နှံစားပြောင်းအတွက်အမျိုးစုံသုံးသောအစေ့များ, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဂါနာအတွက်ရောင်းချသည် $2,000 U.S. အသေးစားတောင်သူလယ်သမားအုပ်စုများအတွက်ကောက်နယ်တလင်းတည်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောအလယ်အလတ်လယ်သမားများသို့မဟုတ်ငှားရမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်.